FICUS "GINSENG": DARYEELKA GURIGA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Geedka dhirta ee gurigaaga - ficus "Ginseng"
Ginseng Waxaa loo arkaa mid ka mid ah ficuska ugu caansan.
Ka mid ah noocyada kala duwan ee ehelkooda, waxay soo jiidataa fiiro leh xidid aan caadi aheyn, oo siinaya warshad muuqaal cajiib ah.
Geedka waxaa sidoo kale loo yaqaanaa wax aan qabyo ahayn iyo dulqaad.
Ginseng, wuxuu microcarp ama ficus-yaraa fruited waxaa iska leh qoyska of Mulberry.
Magaca Laatiinka, magaciisa ayaa u eg sida Ficus microcarpa ginseng.
Xaaladaha dabiiciga ah, waa geed geedo ah. 15-25 mitir sare iyada oo taajkii qarxinta, jirid xoog leh iyo xididada garbaha waaweyn oo hoos u dhacaya.
In dhaqanka qolka inta badan waxaa la koray qaab ah bonsai leh stem yar, laakiin rhizome weyn, qaabeeya sida xididka ginseng. Ma aha fursad "ginseng" waxaa loo tarjumay "ginseng."
Goobta kulaylaha iyo subtropics ee Koofur-bari Asia waa agagaarka geed.
Wakiilka tafaftiraha waxaa sidoo kale loo yaqaan 'laurel Indian', 'jasiirad cagaaran' iyo 'banyan shiineys'.
Caleemaha caleemaha cagaaran ee cagaaran ayaa ah kuwo ballaadhan - ilaa 15 cm dhererka.
Waxay yihiin oval qaab ah oo leh muraayad madow.
Ginseng waa fangas ficus ah.
Laga bilaabo nolol ahaan sida epiphytyt, maadaama uu kobcayo waxay qaadataa xididka xiga ee geedaha martida loo yahay, naqshadeynaya oo uu xakameynayo, isaga oo ka hortagaya in uu horumar sameeyo.
Rizwad murugo leh, taas oo caan ku ah ficus ginseng gudaha, laguma helin dabiiciga.
Waxaa lagu koray beeraha iyagoo isticmaalaya tiknoolajiyad gaar ah oo qarsoodi ah.
Geedka waxaa lagu siiyaa diyaar garow gaar ah wuxuuna ku jiraa xaalado gaar ah.
Kumarka xididku uu gaaro dhumucda iyo qaabka la rabo, dhirta waxaa loo wareejiyaa weel kale, ka tagta inta badan rhizomes dusha dhulka.
Isla mar ahaantaana ka gooyaa jirridda iyo koraan cagaarka cusub.
Badeecooyinka beeraha iyo qaabab gudaha ah oo leh meel dhexdhexaad ah.
Xaaladdan oo kale, rhizome waa qarsoodi ah ee dhulka iyo taajka cufan cufan siinaya quruxda weyn ee geedka.
Dhirta soo jiidata ee qaabka bonsai kama tagi doono qof aan indho la'aan aheyn. Beeralayda intooda badani waxay jecel yihiin ficuusyada geedaha soo socda: Benedict, Bengal, Karika, Lirat, Mikrokarpa, Eden, Leaf Large, Balzamin, Retuz iyo Blunted. Dhammaan shuruucda beerahooda ayaa laga heli karaa boggayaga.
Ficus ginseng waxay ku kala duwan yihiin aan qabyo ahayn markaad baxayso iyo dulqaadka.
Sameynta shuruucda fudud ee daryeelka ayaa ka caawin doonta inuu si wacan u koro, ma jiran karo oo laga ilaaliyo weerarada cayayaanka.
Waa muhiim - Geedka geedka waxaa lagu daboolaa jilif khafiif ah oo khafiif ah, marka uu waxyeello, casiir cad caan ah ayaa la sii daayaa.
Waxaa lagugula talinayaa inaad ka hortagto dhaawacyada noocaas ah markaad daryeesho "saaxiibta cagaaran" - nabarrada ku yaala jirridda muddo gaaban.
Geedkuna wuxuu jecel yahay iftiin kala firdhiya ama hooska qayb ahaan.
Meesha ugu fiican waa daaqada, laakiin sida ugu fog ee suurtagalka ah qalabka kuleylka.
Waa muhiim - Waxaa lagugula talin karaa hal mar iyo dhammaanba si loo go'aamiyo meel joogto ah ee ficus, sababtoo ah isagu ma jecla inuu safro oo laga jawaabo lumin karo caleemo.
Heerkulka ugu fiican ee loogu talagalay arrimahaan - laga bilaabo 20 ilaa 23 ° C.
Xilliga kulaylku wuxuu u baahan yahay hawo joogto ah. Isla mar ahaantaana waa qoraalladu waa kuwo aan loo baahnayn.
Xilliga jiilaalka, santuuqa heerkulka qolka waa in aysan hoos udhicin 16 ° C.
Laga bilaabo gu'ga ilaa dayrta, waraabin badan ayaa loo baahan yahay, laakiin iyada oo aan loo baahnayn, iyo xilliga qaboobaha - dhexdhexaad ah.
Cirridka dheeraadka ah ee ciidda waxay u horseedi kartaa in laysku daro xididada.
Baahida loo qabo waraabinta si fudud ayaa loo go'aamiyaa: qalajinta lakabka ugu sareeya ee ciidda si qoto dheer ah oo ku saabsan 3 cm - calaamad muujinaysa in ay tahay waqti si qoyan ciidda.
Waxaa muhiim ah in la hubiyo in dhulku uusan gebi ahaanba qalajinaynin biyaha biyaha lakulmay ma istaagaan.
Geedku wuxuu u baahan yahay qoyaan badan.
Waxay noqon doontaa mid aad uugu mahadcelinaysa maareynta maalin kasta ee subaxda iyo habeenkii.
Biyaha tani waxay ka wanaagsan tahay in la qaato la kariyey, haddii kale waxaa jiri doona ubax cadaan ah caleemaha.
Sidoo kale, dhirta lama siin doono qubeys diiran mar bishii waxayna si joogto ah u tirtirtaa caleemaha maro qoyan.
Waa suurad wacan in inta lagu gudajiro hababka biyaha ee jirridda ay yaraadeen intii suurtagal ah.
Si aad u kordho qoyaanka, waxaad isticmaali kartaa saxaarada qoyan ee qoyan.
Laga bilaabo Maarso illaa bartamihii Oktoobar, waxaa lagu talinayaa in lagu quudiyo labadii usbuucba hal qof oo ah "saaxiibo cagaaran" oo leh dhismo macdan ah ama bacrimin gaar ah.
Xilliga jiilaalka, quudinta ayaa la dhimaa hal mar bishii.
Bacriminta waa in lagu dabaqaa waraabka ee ciidda qoyan.
Geedka ubaxyada ubaxyada yar, kuwaas oo ku dhex jira xayawaanka guud.
Later waxay u badalaan miraha, waxa loo yaqaan 'syconia', oo u eg midhaha waaweyn.
Guriga, geedka waxaa lagu daboolaa ubax aad u dhif ah, sidoo kale, ma dhalo miro, maadaama ay tahay in lagu ogeeysiiyo cirbadaha yaryar ee ku nool dhulkiisa.
Ficus mikrokarp caleemaha caag ah oo badan, sidaas darteed taajkii waa la siin karaa qaab kasta.
Haddii muuqaalka muuqaalka nuqulada la iibsaday uu yahay mid aad u qanacsan, waxaad ku kaydin kartaa adigoo si joogto ah u xiiraya talooyinka laanta.
Si aad u sameysid tufaax la jarjaray, dusha sare ee geedka waa la jaraa, tagaa wax ka badan 5 cm dhererka laamood.
Foomka xiisaha leh ee taajka ah ayaa la helaa haddii aad doorato laan xoog leh oo koraayo jihad kasta oo aan hor istaagin horumarintiisa.
Jihada ka mid ah laamaha waxaa mararka qaarkood la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo silig.
Si aad u hesho foormo xoog leh waxaa la gooyaa dhowr jeer.
Waxaa la sheegay in la socda nidaamkan, tiro badan oo caleemo ah ayaa sidoo kale laga saaray, taas oo yaraynaysa baahida warshadda ee qoyaanka.
"Laurel Indian" waxay u baahan tahay ciid dabacsan oo bacrin ah oo leh acidity pH laga bilaabo 5.5 ilaa 7.5.
Waxaad ka iibsan kartaa substrate gaar ah ficus ama u diyaari naftaada oo ka soo jeeda qaybo siman oo ka mid ah ciidda aan adka lahayn, peat, turf iyo dhul caleen leh oo lagu daro dhuxusha.
Doorasho kale oo loogu talagalay substrate ku habboon - Qolfaadaha cows, humus iyo dhirta dhoobada ah ee la qaato qaybo siman.
Tijaabada dhalmada waxaa la gashaa sannad walba ama hal sano horraantii guga iyaga oo bedelaya bedelka dhulka, iyo dadka waaweyn - hal mar 2-3 sano Habka is-dhaafsiga.
Guddi: Si aad uhesho qaab isku dhafan inta lagu guda jiro isu tallaalidda, waxaa lagula talinayaa in la jarjiro saddex daloolow saddex geesood.
Labada usbuuc ee ugu horreeya ka dib iibka, geedka inta badan wuxuu dillaacayaa caleenta - sidaas darteed waxa uu ka soo horjeedaa bedelka deganaanshaha.
Tani maaha mid cabsi leh - waraabinta joogtada ah iyo miirista, "cusub" ayaa si dhakhso ah ula qabsan doona oo sii daaya caleemo cusub.
Si aad u hesho xaalado cusub si dhakhso ah, waxay faa'iido u tahay inaad ku buufiso xalka toddobaadkii hal mar. "Appin".
Guddi: Haddii xayawaanka lagu iibsado dhulka gaadiidka, waa lagama maarmaan in loo badalo substrate cusub.
Laakiin tani waxaa la sameeyaa oo kaliya dhowr todobaad ka dib marka uu dego.
In ficus photo "Ginseng":
Ma rabtaa in aad wax badan ka barato noocyada sii kordhaya ee ficus oo aad ku ogaato sawiradooda? Akhri maqaaladayada ku saabsan Boqorka Amstel King, sida fanaanadda caanka ah, Varietis oo qarsoodi ah, Ampeln, kulaylka De Dumbbell, jilicsanaanta Saddex-xagalka, Moklam caan ah, kuwa adag iyo Ali Pumila White Sunny.
Guga ka soo dusha sare ee caleemaha jaray semi-qoryaha guntooda 15 cm dheer oo ku riday biyo dhowr saacadood ah si ay casiir caano u maydheen.
Marka xigta, gooyn ayaa la qalajiyey oo lagu beeray digirta ciidda leh ee leh vermiculite, oo lagu daboolay bac caag ah oo lagu riday meel bannaan oo daboolan.
Ka hor intaan la beeri, substrate waxaa lagu buufin karaa kuleylka foornada ama lagu qaboojiyo qaboojiyaha.
Burburintu waxay dhacdaa 2 bilood gudahood ka dib markii kaas oo geedo yihiin transplanted dheriyo gooni ah.
Shaybaarka qaangaarka ah, qayb ka mid ah xididka ayaa la jaraa, kaas oo lagu beeray substrate, tegaayo 2.5 cm qaybteeda sare waxay kor ugu kacdaa korka dusha sare.
Marka xigta, xididga la gooyo weelka lagu daboolay filim.
Marka aad waraabiso toddobaadkii hal mar oo si joogto ah u duub 3-4 bilood waxaad filan kartaa caleemo cusub.
Ka dib muuqaalka 4-5 baxo ka saar filimka iyo ku rid baadiyaha yar yar meel bannaan oo leh shooga iyo siinta daryeel habboon.
Laga soo bilaabo jirridda ka soo saar jumlada ah ee jilif jilicsan laga bilaabo 2 ilaa 3 cm.
Goobta qashinka waxaa lagu daboolayaa maqaar hawo oo qoyan oo daboolay polyetylene.
Marka xigta, dhirtu si joogto ah ayaa loo dhigaa qoyaan.
Ka dib markii xididdada ka muuqdaan meeshan, qaybta sare ee bonsai waxaa la gooyaa nidaamka xidid cusub oo lagu beeray dher kale.
Habkani waxaa loo isticmaalaa in lagu noolaado nuqulo ay ku lumiyeen saamaynta qurxinta.
Nidaam dhif ah, maadaama ay adag tahay in la helo miraha.
Beeridda miraha waxaa lagu fuliyaa substrate ah oo ka kooban dhoobo iyo geedo sphagnum.
Waxay si deg deg ah u gashan yihiin "geedka aqalka dhirta" iyo si joogto ah qoyan substrate.
Waa muhiim - Waa in maskaxda lagu hayo in hab kasta oo dhalid ah natiijada noqon doonto ficus leh stem caadi ah iyo nidaamka xidid xidhan.
Si aad u hesho nidaam awood leh oo dibadda ah guriga waa mid aad u adag.
Sida hore loogu sharraxay kor, tani waxay u baahan tahay tiknoolajiyad gaar ah.
Geedka wuxuu inta badan ku dhacaa daryeel aan habooneyn.
Dhibaatooyinka soo socda ayaa dhici kara:
Caleemaha cagaaran waxay hoos u dhacayaan - iftiin yar, qulqulo, dhibco heerkul ah, biyaha qoyan ee ciidda, bedelida meel.
Caleemaha waxay noqdaan kuwo huruud ah marka hore, ka dibna dhicin - waraabinta biyo la'aan, qoyaan la'aan, iftiinka saboolka ah ee xilliga jiilaalka.
Caleemaha hoose waxay noqdaan jaalaha - la'aanta nafaqooyinka.
Dhibco mugdi ah ayaa ka muuqda caleenta iyo kalluunka rootiyada xididada - biyaha joogta ah ee ciidda.
Marka aad sameysid daryeel habboon, dhibaatooyinka waa la waayaa: xayawaanka cagaaran si deg deg ah ayey u soo kabanayaan waxayna noqdaan kuwo ku baxaya caleemo cusub.
Haddii geedku uu saameeyo caleemaha xididka, waa inaad isla markiiba bilowdid daaweyn.
Waxaad u baahan tahay inaad ka soo baxdid dheriga, ka saar dhammaan qaybaha bukaanada ee xididka iyo jarida qaybta taajka, si uu bukaanku u bixiyo dhammaan xooggiisa ku soo kabashada.
Marka xigta, waa inaad ku bedeshaa substrate cusub oo ku shub xal xakameyn ah.
Cadaadiska khatarta ah:
Marka cayayaanka la ogaado, daaweynta cayayaanka ayaa la qaadaa.
Si looga hortago baahida baaritaanka joogtada ah ee caleenta iyo daryeelka saxda ah.
Ficus microcarp ma aha oo kaliya qurxinta gudaha, laakiin sidoo kale warshad aad u faa'iido leh.
Geed wax cunaya si fiican wuxuu u bogaa mikroclimate ee guriga, nadiifinta hawada maadooyinka waxyeelada leh sida phenol, benzene iyo trichlorethylene.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay sifooyin badan oo bogsiin ah.
Tinctures iyo diyaar garowga laga sameeyey juice caano iyo caleemo ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo mastopathy iyo neoplasms kala duwan.
Iyada oo lagu caawiyo ficus waxaad ka takhalusi kartaa finanka, finanka iyo hematomas.
Sidoo kale lacagaha laga helo waxay ka caawisaa arthritis, osteochondrosis iyo radiculitis. Geedku ma aha mid sumoobi kara oo gebi ahaanba ammaan ah.
Ficus ginseng u qalmaa inuu gurigaaga joogo muddo dheer.
Iyada oo daryeel ku habboon guriga loogu talagalay geed "Ginseng" ficus ma aha oo kaliya inuu noqdo qurxiyo xarrago leh, laakiin sidoo kale nadiifi hawada qolka.
La dagaallanka barafka barafka ee Colorado qalka!
Liiska noocyada jajabka pear prickly
Kala duwanaanta cherry "Valeriy Chkalov": dabeecada
Ma ogtahay in ay jiraan ilaa toban kun oo noocyo kala duwan oo tufaax ah oo dunida laga diiwaan-geliyey? Kaliya qayb yar oo iyaga ka mid ah ayaa lagu koray dhaqanka Ruushka iyo baahida beeralayda. Maanta waxaan jeclaan lahayn inaan kuu sheegno mid ka mid ah noocyada caanka ah ee tufaaxa, oo loo yaqaan 'Asterisk'. Waxaa lagu qiimeeyaa dhadhanka, kala duwanaanta iyo daryeelka fudud. Read More
Maxay beeralayda Faransiisku uga luntay 100 milyan oo faa'iido ah? Jawaabta ayaa ku jirta ecology.
Tomat De Barao madow - noocyo gaar ah oo leh gaadiidka sare!